Ukuhlawulwa kukaGoogle kuya kuba nenkxaso yamatikiti kunye nokupasa kwebhodi | I-Androidsis
Ukuhlawulwa kukaGoogle kuya kukuvumela ukongeza iipasile zokubhoda kunye namatikiti
Ukuhlawulwa kukaGoogle sisicelo esivela kwindibaniselwano ye-Android Pay kunye neWalethi kaGoogle. Isicelo sokuhlawula senza inkqubela phambili kwimarike kwaye sele idlule kwi-100 yezigidi zokukhutshelwa. Ke ifumene ukuvunywa kwabasebenzisi. Ukongeza, imisebenzi emitsha yaziswa kuyo. Okona kutshanje kuzo kukongeza Inkxaso yokupasa, amatikiti okanye amatikiti.
Kwiiveki ezimbalwa ngoku, eUnited States, uGoogle Pay uvumela abasebenzisi ukongeza amatikiti ezothutho avela kwezinye iinkampani. Ngale ndlela, umsebenzisi ugcina kufuneka aprinte irisithi. Kubonakala ngathi lo msebenzi usebenze kakuhle, kuba inkonzo iyaqhubeka. Ikwafikelela nakwiinqwelomoya nakwiminyhadala.
Le intsha ifunyenwe kwikhowudi yemithombo yeGoogle Pay. Apho babenakho ukubona izingqinisiso kule nkxaso yamatikiti kwiminyhadala kunye nokupasa kokukhwela. Ngale ndlela, abasebenzisi banokuziphatha kwisicelo ngaphandle kokuziprinta.
Kwimeko yokupasa kokukhwela, umsebenzisi uya kuba nolwazi malunga nesango lokubhoda, inombolo yesihlalo okanye ixesha lokuhamba. Yintoni egqithisileIGoogle Pay iya kwazisa umsebenzisi xa kurhoxiswa okanye kulibaziseka. Iya kuba luncedo kakhulu xa useluhambeni.
Ngelixa amatikiti, umqolo okanye icandelo kunye nenombolo yesihlalo esigciniweyo iya kubonakala. Umhla nexesha oza kuqala ngalo umcimbi. Ke umsebenzisi uya kuyazi ngalo lonke ixesha ukuba ngubani kule ndawo. Akukhange kukhankanywe ukuba kuya kubakho izikhumbuzo malunga noku.
Xa uthenga itikiti kwiwebhusayithi, kuyakubakho ukhetho ekuthiwa yongeza kuGoogle Bhatala ». Ke ukungena kumbuzo kuya kukhutshelwa kwifowuni yethu. Ke, siyigcinile apho kwaye asizukufuna ukuyiprinta. Nangona kungaziwa ukuba oku kuyakwenzeka ngokupasa. Siyabona ukuba yimisebenzi eyandisa kakhulu iinkonzo zeGoogle Pay.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Ukuhlawulwa kukaGoogle kuya kukuvumela ukongeza iipasile zokubhoda kunye namatikiti
I-Meizu trio entsha ilapha! Sikwazisa nge Meizu 15, 15 Plus kunye neM15